अझै डर, धक र लाजले यौन शोषणका घटना गुपचुप राखिन्छ : RajdhaniDaily.com -
Home Breaking News अझै डर, धक र लाजले यौन शोषणका घटना गुपचुप राखिन्छ
कानुन संशोधन भए पनि चुनौती उस्तै
चुरे, मकवानपुर । बालबालिकाको व्यावसायिक यौन शोषणको घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पटक–पटक कानुन संशोधन गरिए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वय र व्यावहारिक पाटो भने दरिलो बन्न सकेको छैन ।
पीडित बालबालिकालाई अदालतमा प्रस्तुत गर्दा बाल मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने डर, धक, लाजजस्ता कारण मुद्दा दर्ता भएर कानुनी रूपमा अगाडि बढे पनि पीडितले वास्तविक न्याय पाउने गरेका छैनन् । बालबालिकामाथि गैरकानुनी कार्य भएपछि उनीहरूको सवाललाई कानुनको ढोकासम्म पु¥याउन्जेल अनेकन कठिनायी भोग्नुपरेको अधिकारकर्मीको भोगाइ छ । पीडित बालबालिकालाई प्रभावकारी मनोसामाजिक परामर्र्शकै आभावमा मुद्दा फिर्ता हुने गरेको माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामाले बताइन् । परामर्श गर्दा बकपत्रका लागि तयार भएको पीडितले एकैछिनमा बोली फेर्ने गरेका कारण न्याय दिलाउन आफूहरूको सहयोग नदेखिने गरेको उनले बताइन् ।
सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरका प्रमुख झबिन्द्र ज्ञावलीका अनुसार अधिकांश अभिभावक आफ्ना बालबालिकाको घटना बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । नछोइकन परैबाट पनि बालयौन शोषण हुने कुरालाई कानुनले समेटेको छ । तर, यसको प्रमाण नपुग्ने गरेका कारण पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
जिल्ला बारएसोसियसनका अध्यक्ष अधिवक्ता ऋषि केबी यस्ता घटनामा प्रमाणको कमीकै कारण पीडकले उन्मुक्ति नपाउने बताउँछन् । प्रयाप्त प्रमाण नपाएको आधारमा मुद्दा अगाडि नबढ्ने अवस्था अब नरहेको उनको तर्क छ । पीडितले मुद्दा दर्ता गर्नु नै एउटा प्रमाण हो, जाहेरी दिएपछि त्यसैलाई पहिलो प्रमाण मान्ने नजिर भएकोले पीडक उम्कन नपाउने गरी लागि पर्न उनले आग्रह गरे । पीडितलाई अदालतमा प्रस्तुत गर्नु अगाडि उच्चस्तरीय काउन्सिलिङ हुनुपर्ने उनले बताए ।
सरकारी वकिल कार्यालयका अधिवक्ता नेत्रप्रसाद आचार्य धेरैजसो घटना अदालतमा दर्ताकै रूपमा नआएको बताउँछन् । कसैप्रति डर नभएको मानसिकताका कारण समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
बालयौन शोषण तथा व्यावसायिक बालयौन दुव्र्यवहारको घटना सहमतिमा हुने गरेको कारण यसबाट बालबालिकालाई बचाउन अभिभावकस्तरमै चेतनाको खाँचो रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछाने बताउँछिन् ।
माइती नेपाल मकवानपुरले हेटौंडामा आयोजना गरेको बालबालिकाको व्यावसायिक यौनशोषणविरुद्ध सरोकारवालासँग बैठकमा सहभागीले पीडित बालबालिकालाई न्याय दिलाउन समस्या भएको बताएका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा मौलिक हकअन्तर्गत बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन, कुनै पनि बालकालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक बनाई राख्न पाइने छैन, कुनै पनि बालकालिकालाई सेना प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित कार्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।
तर, नेपालमा बालयौन शोषणको घटना अन्त्य हुन सकेको छैन । विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा बार, दोहोरी साँझ, खाजाघर, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग, बसपार्कजस्ता क्षेत्रमा बालयौन शोषण तथा व्यावसायिक बालयौन शोषण हुनेक्रम घटेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै व्यावसायिक बालयौन शोषणका ४ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । इमेल इन्टरनेटको माध्यमबाट यस्ता घटना हुने क्रम विस्तारै बढ्दै आएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
बालमैत्री व्यवहार सुधारका निमित्त नियमित रूपमा परामर्श गर्ने र योजनावद्ध रूपमा दीर्घकालीन सोचका साथ कार्यक्रम गर्नु जरुरी रहेको अधिवक्ता ललिता श्रेष्ठले बताइन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक बालयौन शोषण भनेर किटानीका साथ ४ ओटा मुद्दा दर्ता भएको भए पनि अन्य शीर्षकमा बालबालिका पीडित भएको केसहरू रहेको प्रहरी नायव निरीक्षक विमल गिरीले बताए ।
गण्डकी प्रदेश : बाढीले बगायो सडक, पुल र मन्दिर, एक बेपत्ता
म्याग्दी । निरन्तरको भीषण वर्षापछि कालीगण्डकी, म्याग्दी र रघुगङ्गा नदीमा सोमबार आएको बाढीले म्याग्दीको विभिन्न ठाउँमा सडक, तीन मोटरेबल, दुई झोलुङ्गे पुल तथा दुई...
भर्खरै Kumar Raut - May 19, 2020 0
लकडाउन सफल बनाउन प्रहरीलाई सघाउदै युवा
Editor-Picks Dhruba Lamsal - March 29, 2020 0
बर्दिया । कोरोना भाइरसको संत्रासका कारण मुलुक यतीखेर लकडाउनमा छ । कोरोनाको जोखिमाबाट जोगिन सबै नागरिक घर भित्र सेल्फ वारेनटाइनमा छन् । जनतालाई सजग...
Breaking News Roshan Shrestha - March 5, 2021 0
प्रदेश ६ Kumar Raut - February 9, 2021 0
बैतडी । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या भएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका...
अर्थ कौशिला कुँवर - March 12, 2021 0
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले नेपालगञ्जमा अटोमेसन प्रविधिको पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न थालेको छ । नेपालमै पहिलो पटक निगमले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको आर्दश नगरस्थित...
Breaking News Dhruba Lamsal - April 22, 2020 0
बालकमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि विश्रामपुर गाउँपालिका सिल
प्रदेश Dhruba Lamsal - May 12, 2020 0
बारा । बारामा एक जना बालकमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि प्रशासनले विश्रामपुर गाउँपालिका सिल गरेको छ । संक्रमित बालक पर्साको बीरगञ्ज स्थित वडा नम्वर ३ छपकैयामा...
Not-to-be-missed Kumar Raut - May 2, 2020 0